Cimilada | Samfunnskunnskap.no
Norwey waxey leedahay afar xilli: gu’, xagaa, dayr iyo jiilaal.
Cimilada Norwey wey kala gedisan tahey waxeyna ku xidhan tahey qeybaha dhulka kala duwan. Waxaana kala gedisnaan kara qeyb isku gobol ah, sidoo kale sannadba sannadka kale wuu ka gedisnaan karaa. Guud haan waxa la odhan karaa in qeybaha xeebaha ku yaalaa ey yara diiranyihiin barafkuna ku yaryahey xilliga qaboobaha, halka gobolada aan xeebaha ku ool ey qabowyihiin barafkuna ku badan yahey. Taa bedelkaad gobollada gudaha dalka ku yaallaa waxey xagaa kulul oo qallalan. Galbeedku wuu ka roob badanyahey Bariga.
Inta badan dabayl ayaa ka dhabata/dhacda xeebaha, gaar ahaan dayrta.
Sidoo kale waqtiga ey iftiinka noqotaa wey kala duwantahey waqooyiga iyo koonfurta dalka. Dhinacba dhinaca uu waqooyi ka sii xigo maalintu wey ka gaabantey xilliga qaboobaha. Magaalada Hammerfest ayaa Yurub ugu baaleysa waqooyiga aduunka waana madow laba bilood xilliga qaboobaha. Wax iftiin ahi ma jiro maalintii oo dhan. Laakiin waqtiga kuleylaha waa iftiin habeen iyo maalinba qorraxduna ma dhacdo xataa habeenkii. Waxaana loogu yeedhaa caddeedii habeen-badhka.
Koonfurta dalka waxaa kale oo jira farqi weyn oo u dhexeeya inta maalmood ee ay xagaaga yihiin iyo jiilaalka. Laakiin koonfurta ma jiro mugdi ama qoraxda habeenbadhka.
polarsirkel wuxey waqooyi ka martaa Mo i Rana, taas oo kala soocda xadka dhulka xilliga mugdiga iyo caddeeda habeen-badhka (midnattsol).
Heerkulka ugu sarreeya ee lagu cabirey Norwey waa 35,6 digrii selsiyos (Nesbyen, 20. juuni 1970).
Heerkulka ugu hoosaysay ee lagu cabirey Norwey waa 51,4 digrii selsiyos (Karashok, 1.jenaweri 1886).
Maayadda badda oo dhexdhexaad ah
Wallow Norwey ay waqooyi fog dhacdo, cimiladu aad ayey dhexdhexaad u tahay marka loo eego meelo kale oo waqooyiga adduunka ka mid ah. Tan waxa sabab u ah maayadda qulqulka badda ee dhexdhexaadka ah ee ka timaada gacanka Meksiko iyo Ameerikada dhexe ee ku soo qulqula ilaa xeebta noorwiijiga oo keenta kulayl.